६ महिनामा पनि खुल्न सकेन मलेसियाको रोजगारी गन्तब्य, कहिले तयार होला विधि र प्रक्रिया ? – Mission Khabar
६ महिनामा पनि खुल्न सकेन मलेसियाको रोजगारी गन्तब्य, कहिले तयार होला विधि र प्रक्रिया ?
मिसन खबर ५ मंसिर २०७५, बुधबार ०५:५६
काठमाडौं–सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा सक्रिय रहेका बिचौलिया संयन्त्र खारेजी गराउने प्रयास स्वरुप मलेसियामा कामदार पठाउन रोकेको ६ महिना बितेको छ । योबीचमा मलेसियाले नेपालसँग श्रम समझदारी पनि गरिसकेको छ । तर, समझदारी भएको तीन साता बित्दा पनि मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
श्रम समझदारी कार्यान्वयनका लागि गठित मलेसिया र नेपालको संयुक्त कार्य समूह सक्रिय रहेको भनिएपनि शुन्य लागतमा कामदार पठाउने विधि र प्रक्रिया बन्न सकिरहेको छैन । यसैको प्रभाव स्वरुप लामो समयदेखी मलेसियाको श्रम बजारका कामदारहरु रोकिएर बनेसका छन् । हुनत, मलेसियाले समझदारीपछि तत्कालका लागि पुरानै संयन्त्रमार्फत कामदार पठाउने प्रक्रिया खुला गर्न आग्रह गरको थियो । तर बिचौलियालाई ठग्ने अवशर नदिने भन्दै श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसियाको प्रस्ताव स्विकार गरेनन् । श्रम समझदारीअनुरुप नै नयाँ विधि, प्रक्रिया र संयन्त्र बनाएर व्यस्थित तरिकाले कामदार पठाउनुपर्ने उनको अडान छ ।
नयाँ विधि टुंगो लगाउन संयुक्त कार्य समूह क्रियाशिल रहेको भनिएपनि तीन साताको समय यतिकै वितेको छ । श्रम मन्त्रालय भने केही दिनमै मलेसियाको श्रम बजारमा कामदार पठाउन सुरु गरिने बताउछ । श्रम समझदारी अनुसार नेपाली कामदार मलेसिया जादा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मेडिकल, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र म्यानपावरको सेवा शुल्क रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलब दिँदा नै ‘रिफण्ड’ गर्ने व्यवस्था सहितको विधि र प्रक्रिया तयार गरेपछि कामदार पढाउने बाटो खुल्ने बताइएको छ ।
यता, वैदेशिक रोजगार व्यवासायी महासंघले भने सरकारले अझै मलेसिया खुला नगर्दा कामदारहरु प्रभावित भएको बताएको छ । महासंघ कलिङ भिसा आएर मेडिकल गरिसकेका झण्डै १० हजार कामदार बारे सरकारले निर्णय लिनुपर्ने बताइरहेको छ । नयाँ सम्झौता अनुसारको कार्यविधि बन्न नसक्दा मलेसियाको रोजगारी कहिलेबाट खुल्ने अझै अनिश्चित छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, विश्व / विविध, समाचार